Umzi-mveliso okhethekileyo weRivet oyimfama-iChina iSpecial Blind Rivet Venufacturers, Suppliers
I-Standard Blind Rivet
I-Special Blind Rivet
IAluminiyam Seal End Blind Rivet
Intloko yeFlat Full Hexagonal Body Rivet Nut intshayelelo
Rivet Nut Countersunk Knurled Open End inkcazelo
Intloko ye-CSK evulekileyo yokuphela kwe-Rivet Nut
Vula Isiphelo Flat Intloko Knurled Body Blind Rivet Nut
Intloko yeFlat Cylindrical Rivet Nut
Intshayelelo ye-Double Core Ukutsalwa kwesandla i-Riveter
Single Hand Riveter Gun Intshayelelo
Umzi-mveliso okumgangatho ophezulu ongangeni manzi Vala iirivethi ezingaboniyo.
Zilukhetho olunexabiso eliphantsi, elomeleleyo onokulusebenzisa endaweni yeendawo zokuwelda, izikrufu, okanye iibholiti, aziyi kugqwala okanye zidle, zomelele kunerivethi zealuminiyam.
Itywina eligcweleyo lentsimbi End Blind Rivet
I-Steel Seal end i-rivet eyimfama yi-rivet eyimfama entsha yokuqinisa.Ayinayo nje izibonelelo zokusetyenziswa ngokulula, ukusebenza kakuhle okuphezulu, ingxolo ephantsi, kwaye inokunciphisa ukuqina kwabasebenzi, njl.
Ineempawu zokutywinwa kakuhle kwesiqwenga sokudibanisa kunye ne-riveting ye-core ye-rivet eyimfama ngaphandle kokugqwala.
I-Aluminiyam epheleleyo yeSitywina iPhelisa iRivet eyimfama
I-Aluminiyamu yetywina isiphelo serivethi eyimfama sisakhiwo esivaliweyo, njengeglasi ebiyelweyo engundoqo yokutsala i-rivet pin core intloko itshixiwe ngaphakathi kwentloko yesikhonkwane, ukutsalwa kwe-rivet kugqityiwe, kuvalelwe, umbindi wokutsalwa kweerivets zentloko yomsila wesikhonkwane utsalwa ngaphakathi ngokufaka umphandle. edge of umngxuma, umngxuma ngokufaka ivalwe ngokupheleleyo ukuba baphile, intloko isikhonkwane unokuqinisekisa akukho kuvuza, akukho kuvuza.
Itywina eligcweleyo lensimbi engenastainless End Blind Rivet
Iirivets zenzelwe ngokukodwa ukufakwa ngesandla.Ziyakwazi ukutsalwa kwimingxuma yepaneli okanye i-underframe.Zenziwe ngezinto ze-elastomer kwaye zinokuqina okuhle.Ziyakwazi ukufakwa ngokukhawuleza nakwindibano yokuphazamiseka.
Zonke iirivethi ezingaboniyo zensimbi ezingenasici zilukhuni, zinamandla aphezulu okuzibamba kunye namandla aphezulu okucheba, kwaye ungaze ube nomhlwa.
IAluminiyam Peel End Blind Rivet
Luhlobo olutsha lwe-riveted fastener olulungele kakhulu ukukhwela.Inokubonisa iingenelo zayo ezikhethekileyo kwindawo encinci okanye kwindawo engqongileyo ngaphandle kompu werivet okanye ukusetyenziswa kompu werivet.Iziqwenga ezibini okanye ngaphezulu ezidityanisiweyo zinokuvuthwa ngempumelelo ngokucofa i-mandrel ngento enye efana nehamile.
IAluminium Multi-Grip Blind Rivet
I-Multi-Grip rivets inoluhlu olubanzi lokubamba, ngoko ke i-rivet inokuthi ithathe indawo ye-2 okanye i-3 rivets eqhelekileyo.Inokunciphisa uluhlu kunye nomsebenzi wokuqikelela.Ilungele usetyenziso apho ubungqingqwa bemathiriyeli obahlukeneyo bufuna ubukhulu be-rivet.Olu luhlu lubanzi lokubamba lunyusa ukuguquguquka koyilo kwaye lunciphisa uluhlu lwe-rivet, olunokugcina imali eninzi.Zikwafaka imingxuma emikhulu kwaye ziyakwazi ukumelana nokungcangcazela nokufuma.
I-Steel Multigrip Blind Rivet epheleleyo
Iirivethi ezingaboniyo zetsimbi yeMultigrip ziyilelwe ngokukodwa usetyenziso apho imathiriyeli yobukhulu obahlukeneyo iya kufuna iirivethi ngokobungakanani obuninzi.
Ibonisa uluhlu olubanzi lokubamba olubanika ukuguquguquka kweentlobo ezahlukeneyo zezicelo.Banokunciphisa uluhlu lwe-rivet kunye neendleko ngokuthatha indawo yeesayizi ezimbini okanye ngaphezulu ze-rivet "eqhelekileyo".
Intsimbi egcweleyo yokuqina okuphezulu kwe-Blind Rivet Inter-Lock
I-Inter-lock epheleleyo ye-Steel High-yomelele iirivethi ezingaboniyo zinamandla aphezulu, ukubamba okuninzi, iziqhoboshi zokutshixa zangaphakathi eziyilelwe ukubonelela ngokucheba kunye namandla aqinile.Inkqubo yangaphakathi yokutshixa oomatshini ibonelela nge-100% yokugcinwa kwe-mandrel, itywina lokumelana nemozulu kunye nendibaniselwano eyomeleleyo yokungcangcazela.
I-Steel epheleleyo ephezulu-yomelele iBlind Rivet Monobolt
I-Monobolt i-high-forth-high-forth blind rivets yi-high-high-forth-high-force structure blind rivets with locking rods kunye nokuzaliswa komngxuma oncomekayo kwizicelo ezinzima.I-Monobolt blind rivets zenzelwe kwaye ziphuhliswe kwizicelo ezifunwayo apho ukhuseleko kunye nokusebenza kubaluleke kakhulu kwiimfuno zabathengi.
I-Tri-Fold Blind Rivet
I-Tri-Fold blind rivet yenza imivimbo emithathu kwicala lentloko evalayo ngexesha lokuseta.Imivimbo emikhulu ebunjiweyo isasaza amandla okubamba asetyenziswayo ngokulinganayo kwaye ngobunono kwizinto ezikhutshiweyo.Kwakhona, umphezulu omkhulu wemivimbo unika ukhuseleko olugqwesileyo ngokuchasene ne-rivet itsalwa kwiindawo ezithambileyo kakhulu, ezinabileyo okanye ezibhityileyo.
I-Structural Blind Rivet Hemlock Structural Blind Rivet
Ukuqina okuphezulu kunye namandla okucheba.
Amalungu angenamanzi ngokupheleleyo.
Ukufikelela kwicala elinye.
Ukuqina nomgangatho ophezulu joint, vibration-resistant ngenxa yokutshixa yayo yangaphakathi mandrel.
I-Wuxi Yuke yeNzululwazi yokusiNgqongileyo neTekhnoloji Co., Ltd.